ဖိုးစီ (ရုံးတော) – Sorry ပုံပြင် | MoeMaKa Burmese News & Media
သို့သော် ဒီမှာဘက်တွင် သုံးရသော “Sorry” က မြန်မာ့ ဆောရီး နှင့် အနည်းငယ် ကွဲလွဲလေသည်။ ဥပမာ – ကျနော့် အမှားတစ်ခု အတွက် “ဆောရီး” ဟု တောင်းပန်ခဲ့သော် မြန်မာ မိတ်ဆွေက “ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ရပါတယ်” လို့ ပြန်ပြော ပေလိမ့်မည်။ ဒီ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလည်း “Never mind’’ သို့မဟုတ် “It’s Okay. Doesn’t matter” ဟု တုံ့ပြန်တတ်သည်။
တရက်တွင် ကျနော်တို့ စက်ရုံ၌ အပ်ထားသော အကြမ်းထည် ပစ္စည်းများမှာ ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့် တခု၌ ပျက်စီး သွားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျနော့် ရာထူးတာဝန်မှာ “QA Engineer – အရည်အသွေး တာဝန်ခံ” ဖြစ်လေရာ ဖြစ်ခဲ့သော ပြဿနာအတွက် ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြု၍ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အနေဖြင့် ရှင်းလင်းပြောဆိုရန် တာဝန်မှာ ကျနော့် အပေါ်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ကျရောက်လာခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး ခန်းအတွင်းဝယ် တဖက် ပစ္စည်းရှင် ကုမ္ပ္ပဏီမှ လူကြီးများအား ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင် ရှင်းလင်း ပြောပြ ပြီးသောအခါ “Procurement Manager – ပစ္စည်းဝယ်ယူ ဖြည့်တင်းရေး မန်နေဂျာ” မှ ဤကိစ္စအတွက် ကျနော်မှ “Sorry” ဟုပြောရန် အစီအစဉ် ရှိ၊မရှိ မေးမြန်းလာပါသည်။ ကြီးမားသော ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု အတွက် အလွန် လွယ်ကူလှသော တောင်းပန်စကား ဖြစ်နေရကား ကျနော်က ပြောပါမည်၊ “ဆောရီး” ပါ၊ ဒီ ဧရိယာ အပိုင်း ကိုလည်း တိုးတက်အောင် ကြံဆောင် ပါမည် အစရှိသဖြင့် QA တာဝန်ခံ တို့ ထုံးစံ ပြောသင့်သည်များကို ပြောခဲ့မိသည်။
သို့သော် ဤအစည်းအဝေးသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မှတ်တမ်းယူ နေသော တရားဝင် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပွဲ ဖြစ်လေရာ ကျနော် ပြောသမျှသည်လည်း အလွတ်သဘောမဟုတ်၊ ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားပြု တရားဝင်ဖြစ်လျက် ရှိသည်ကို ကျနော် သတိမမူခဲ့မိချေ။ မကြာပါချေ။ ကျနော်၏ “Sorry” တစ်လုံးကို မှတ်တမ်းပြုလျက် ပျက်စီးခဲ့ရသော ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ရန် ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်းဌာနသို့ “Debit Notes – အကြွေးတောင်းစာ” များ ရောက်လာခဲ့တော့မှ ဤမှာဘက် တိုင်းနိုင်ငံများ၏ “ဆောရီး” တစ်လုံး နှင့် တောင်းပန်မှု ဆိုသည်မှာ နောက်ဆက်တွဲ တာဝန်ယူမှုများတွဲလျက် ပါဝင်နေကြောင်း အံ့သြခြင်း ကြီးစွာ နားလည်ခဲ့ရသည်။
ဒေသတွင်း သတင်းစာများက “Missing9milions – လူ ၉သန်းပျောက်ဆုံးမှုကြီး” ဟူ၍ ခေါင်းတင်ကာ စာလုံးမည်းကြီးများဖြင့် အရေးတယူ ဖော်ပြကြသည်။ ထိုစဉ်က လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော တာဝန်ရှိ လူကြီးများသည် ယနေ့ကာလ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ် ၌လည်း ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ကာ နိုင်ငံ၏ အရေးကြီးလှသော ထိပ်ပိုင်းတာဝန်များကို ယူထားဆဲပင် ဖြစ်၏။
တိုင်းပြည်အတွင်း ရေကြီးခြင်း၊ ဆည်ကျိုးခြင်း၊ လျှပ်စစ် မီးပြတ်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်၍ လူအများ မသေသင့်ဘဲ သေရခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ အာဟာရပြတ် သေဆုံးခြင်း အစရှိသော ကပ်ဆိုး အမျိုးမျိုးအတွက် “Disaster Management – ကပ်ဘေးအန္တရာယ်များ ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု”၊ “Disaster Recovery Plan – ကပ်ဘေး ကျရောက်ခြင်းများအား ပြန်လည် နာလန်ထူရေး အစီအမံ” များ ရေးဆွဲ၍ သဘာဝ အန္တရာယ်ကြောင့်လော၊ လူလုပ် အမှားလော၊ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်သော ချို့ယွင်းချက်လော စသဖြင့် တတ်ကျွမ်း နားလည်သည့် ပညာရှင်များ၏ အကြံဉာဏ် ကိုယူ၊ တာဝန်ခံသင့်သည်ကို တာဝန်ခံကာ အမှားကို ၀န်ချ တောင်းပန်လျက် ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် အသစ်က ပြန်စရန် အုပ်ချုပ်စီမံသူတို့အား ပြည်သား တစ်ယောက် အနေဖြင့် တောင်းပန်ချင်လှသည်။
လက်ရှိ သမတ အစိုးရ သက်တမ်း ငါးနှစ် ပြည့်ရန် တစ်နှစ်ခန့်မျှသာ လိုပါတော့သည်။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ခဲ့ပါသည် ဟူသည့် သမိုင်း မှတ်တမ်းကို ကိုင်ဆောင်လိုသည့် သမတ အစိုးရ အနေဖြင့် လက်ကျန် ကာလ ကလေးတွင် အမှားကို ၀န်ခံတတ်သည့် “ဆောရီး” ပြောတတ်သော သမိုင်း စံနမူနာ ကလေးပါ ထပ်ဆောင်း၍ ထိုဝန်ခံမှုအတွက် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်တတ်သော “Good Government – ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရ” အဖြစ်ကို သာမန် ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် မြင်လိုလှပါသည်။
2 Responses to ဖိုးစီ (ရုံးတော) – Sorry ပုံပြင်
ko zaw on November 3, 2014 at 6:56 pm
Sorry, i dont want to say “sorry” unless you got9millions online vote to support DASSK & NLD. NLD. Show me now.
Maung Mya on November 4, 2014 at 11:30 am
When Ye Htut said . recent weeks. . ‘ Third Wave ‘ .. ‘ Fourth Wave ‘ changes is about to begin.
when did ‘ first wave ‘ and ‘ second wave’ happen. ?
did he or his predecessor said anything about ‘ First Wave ‘ , ‘ Second Wave ‘ in 2011 March when Thein Sein Took office ?
they never ever said that words , ‘ First, Second ‘ and now . that stupid minister YeHtut stated
‘ Third Wave ‘ and ‘ fourth ‘ wave.
what does it imply ? What does it mean ?
Where is the bench mark ? Where is the evaluation ?
They are ‘ cheating, lying and doublecrossing the the whole innocent easy-to-get-lied Myanmar People.
If something happen in future, get this bastard ‘ Ye Htut ‘ . Don’t forget to get him from the bottom of his scrotum and testicles. . Get Him .. Get Him.. don’t let him go loose.